Dhageyso:-Gudoomiye Siidii “Halka ay Diyaarada Ku Dhacday Waa jJdka Isku xira Toora-Toorow iyo Afgooye” | warsanradio baydhabo
Home WARARKII MAANTA	Dhageyso:-Gudoomiye Siidii “Halka ay Diyaarada Ku Dhacday Waa jJdka Isku xira Toora-Toorow iyo Afgooye”
written by warsan radio 29/10/2015
Afgooye(WSR)— Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose C/qaadir Maxamed Nuur Siidii ayaa xaqiijiyay duhurnimadii maanta diyaarad ay ku dhacday duleedka galbeed ee degmada Afgooye, isagoo sheegay inay wadaan baaritaan ku aadan diyaarada dhacday nooceeda iyo waxay siday.
C/qaadir Siidii oo la hadlayay Radio Muqdisho ayaa sheegay in diyaaradan ay tahay tii labaad oo ku soo dhacday agagaarka Afgooye, kadib markii labo todobaad ka hor diyaarad xamuul aheyd oo sahay u siday AMISOM ay ku dhacday agagaarka deegaanka Carbiska.
“Diyaaradii labaad ayaa ku soo dhacday agagaarka Afgooye, abaarihii 1-dii duhurnimadii ayay soo dhacday, waxaa baaritaan ku heynaa diyaarada nooca ay tahay, waxay ku dhacday meel 9-KM dhanka galbeed ka xigta Afgooye, gaar ahaan tuulada Cusmaan Durre”ayuu yiri Mr Siidii.
Mr Siidii ayaa sheegay in hadii ay khasaaro jiraan ay dib ka soo sheegayaan, waxaana uu ka gaabsaday in diyaarada aheyd rakaab iyo in kale.
“Ciidamada xooga dalka iyo AMISOM ayaa hada ku baxay halka diyaarada ku dhacday, waxaa jidka u dhaxeeya Toora-Toorow iyo Afgooye, waxaa nagu maqaala ah in kooxihii nabad diidka inay ku dhow yihiin aagaas”ayuu mar kale yiri Mr Siidii.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in diyaarada dhacday ay tahay diyaarad yar, waxaana loo maleynayaa inay tahay diyaaradaha yar yar ee duulimaadyada ku taga gobolada dalka, kuwaasoo ay leeyihiin Shirkado Soomaaliyeed.
Xilliga ay diyaarada dhaceysay ayaa la sheegay inay roobab xoogan ka da’ayeen Gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana laga yaabaa in hawada oo xumeyd darteed ay diyaarada u dhacday, walina wax faah faahin lagama haayo.
Diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa la sheegay inay dul heehaabayaab aaga ay diyaarada ku dhacday, waxaana sidoo kale la sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ay kormeerayeen halka ay diyaarada ku dhacday.
Dhageyso:-Gudoomiye Siidii “Halka ay Diyaarada Ku Dhacday Waa jJdka Isku xira Toora-Toorow iyo Afgooye” was last modified: October 29th, 2015 by warsan radio
Dhageyso:-wareysi Cabdiqani Siid Axmed G/doomiyaha Deg Afgooye +Wararkii ugu Dambeeyay diyaarad ku dhacday duleedka degmada Afgoye>>
Dhageyso:-Fariin Ka Soo Yeertay Gudoomiyaha Gobalka Bay Dr. Cabdirashlid Cabdullaahi Maxamed, >>
dhageyso:-Wareysi Ku Saabsan Barakacayaasha Magalada Baydhabo oo Ka Hadlay Aqoonyahan oo Katirsen Ururka Rayadka Hassan-Balck >>
Dhageyso:-Wararkii Habinimo Idacada Warsan Radioee Magaalada Baydhabo Ee Gobalka Bay
Dhageyso:-Dhamaan codadaka Sawirro: KuI.an looga hadlayay la dagaalanka Xarakada Alshabaab 00 Baydhabo ka dhacay >>
Wasaaradda Caafimaadka KGS Oo Qalab Lagu Keydiyo Dhiiga Ugu Deeqdey Isbitaalka Baydhabo (Sawiro)
Dhageyo:-Wareysi Xasaasi Ah oo Aanu La Yeelanay Maanta Gadomiyaha Gabolka Baay>>
Dhageyso + Waresi: Ciidamada Dowlada FS Iyo Kawa Booliska Ah Ee KG Oo Howlgalo Ay Ka Fulin Donaan Degaanada Al Shaaba Ay Kaga Sugan Yihiin KG
Dhageyso:-Barnaamijka ku lanka Radio Warsan iyo Warbaahunta KGS, IYO CAWA,,
Dhageyso:-gudoomiyaha haweenka bulshada konfur galbeed soomaaliya marwo muraayo oo uga baaqday
Dhageyso:-Wareysi uu Siyey Warbhinta KGS iyo Radio Warsan Gudoomiye Ku Xigeenka Xudur>>